Rugby vehivavy - Lalao tsapa :: Nifandimbiasana ny fandresena teo amin’ny Makis sy Tonizia • AoRaha
Rugby vehivavy – Lalao tsapa Nifandimbiasana ny fandresena teo amin’ny Makis sy Tonizia
Miditra amin’ny fihodinana faharoa ny lalao tsapa na ny « Sevens Solidarity Camp », amin’ny taranja baolina lavalava lalaovin’olona fito, sokajy vehivavy, mandeha any Tonizia, amin’izao fotoana izao. Nanamarika ny fandaharam-potoana, omaly, ny lalao roa nifandonan’ny ekipam-pirenena malagasy na ny Makis sy ny Toniziana. Nifandimbiasana ny fandresena teo amin’ny roa tonta raha ny voka-dalao, omaly.
Tsara fanombohana ny Malagasy teo amin’ny fihaonana voalohany. Niondrika teo anatrehan’ny Makis tamin’ny alalan’ny isa, 19 noho 10, i Tonizia. Nahitam-pahombiazana ny fanovana paikady teo amin’ny fanafihana napetraky ny mpanazatra malagasy. Nivadika anefa ny rasa nandritra ny lalao faharoa satria lavon-dry zareo Toniziana tamin’ny isa, 17 no ho 12, indray isika. Niezaka nanohitra hatramin’ny farany ny Makis saingy hita ho lesoka ha- trany eo amin’ny fiarovan-tena. Nisongadina nandritra ny fifandonana kosa anefa ny hakingan’ny Malagasy eo amin’ny hazakazaka sy tanjaka ary famonoana baolina.
Anio no hifarana ny Sevens Solidarity Camp ary mbola misy lalao voalahatra hataon’izy efatra ambin’ny folo mirahavavy mandrafitra ny Makis. Tafiditra ao anatin’ny fanomanana ny lalao sakana hatao ny Monaco, Frantsa, (19-21 jona) hikatsahana tapakila handraisana anjara amin’ny Lalao Olimpika 2021 any Tokyo, Japana (26 -31 jolay) ity lalao fanomanana any Tonizia ity.
Baolina kitra – « Mondial 2022 » :: Mihemotra amin’ny septambra ny lalaon’ny Barea sy Benin
Rugby vehivavy – Fanomanana :: Nitondra vokatra nahafa-po ny Makis avy any Tonizia